စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ အဘယ်အရာကိုမျှအားလပ်ရက်သို့မဟုတ်အားလပ်ရက်ပြောပါတယ်, အတော်လေးရေပန်းခြံနဲ့တူ, သငျသညျမထငျမ? နေရောင်, ရေခဲမုန့်, တချို့အကြီးအကျယ်ရေဆလိုက်ဆင်းလျှောနွေရာသီအားလပ်ရက်များအတွင်းမှာပျော်စရာအဘို့အဆုံးစွန်စာရွက်ဖြစ်ပါသည်! ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးရေပန်းခြံများကိုစမ်းသပ်ရန်ခက်ခဲသောအလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့သည်…
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ သငျသညျနှစ်သိမ့်ကြုံတွေ့င့်ပြီးတာနဲ့, အဆင်ပြေပါတယ်, နှင့်ရထားခရီးသွား၏အထွေထွေအံ့ဘွယ်သော, ဘဝတစ်ခက်ခဲပြန်လာ pre-ရထားလမ်းဖွင့်. ကျနော်တို့နွေရာသီအတွက်အကောင်းဆုံးဥရောပရထားလမ်းကြောင်းများအကြောင်းပြောနေတာပါတယ်အထူးသဖြင့်လာသောအခါ. သာယာလှပလမ်းကြောင်းများနှင့်အတူထုပ်ပိုးတစ်ဦးကတိုက်ကြီး, အံ့သြဖွယ်ရှုခင်းများ, နှင့်မယုံနိုင်စရာနေရာများတစ်ပိုလျှံ…
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ ကလေးတွေနှင့်အတူခရီးထွက်ဖြစ်စေမယ့်အိပ်မက်ဆိုးသို့မဟုတ်သင့်အသက်တာ၏အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်. ကျွန်တော်တို့သူငယ်များ '' တောင်းဆိုနေတာသဘာဝနှင့်သူတို့ကိုလုပ်ကြဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒမှကျေးဇူးတင်ပါသည်, အဘယ်သူမျှမအလယ်မြေပြင်ကိုများသောအားဖြင့်လည်းမရှိ. သို့သျောလညျး, ကလေးများနှင့်အတူသွားလာရန်နည်းလမ်းများရှိသည်…